Ụdị chrysanthemum nke Korean dị iche iche - Ornamental osisi na-eto eto - 2020
Nkọwapụta na foto nke ụdị nke ndị chrysanthemums nke Korean kacha mma
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-ahụ okooko osisi n'anya, onye ọ bụla nwere ụdị mmasị ha. Onye nwere roses ma ọ bụ lilies, onye nwere chamomiles ma ọ bụ gladioli, ma oke mmadụ nile nwere obi ụtọ na chrysanthemums. Ya mere, anyị na-atụle ụdị nke chrysanthemum nke Korean kacha mma ma dị mma.
Ị ma? Kiet ke otu obio emi ẹkedude ke China ẹkedọhọ ke ifụri emi. N'ebe ahụ, ọ bụ akara nke mgbụsị akwụkwọ ma guzo n'otu uzo na osisi ndị dị ka orchid, bamboo na piom. Ha niile so n'òtù "anọ ndị a ma ama".
Chrysanthemum Korean Anastasia
Korean Korean Korean Chrysanthemum
Chrysanthemum Korean Korea
Koria Chrysanthemum Korea
Chrysanthemum Korean Daisy
Chrysanthemum Korean Lilac
Korean Chrysanthemum Umka
Korean Chrysanthemum Lilac ụgha
Chrysanthemum Korean Lipstick
Chrysanthemum Korean Bayram
Elu nke ohia a dị 60 cm na dayameta ya dị 45 cm. Ihe ndị ahụ na-acha odo odo na-acha odo odo na agba na dayameta 6 cm. Osisi ahụ na-agbapụ ihe dị ka ụbọchị 80 site na ụbọchị ikpeazụ nke July. Ha nwere ezigbo ihe ọkụkụ, onye na-amu amu. Bayram dị iche iche na-eguzogide ọgwụ ọjọọ, ọrịa dị iche iche na pests.
Otu n'ime ụdị osisi chrysanthemum nke Korea bụ Anastasia. Ogologo ya dị 45 cm, na dayameta nke ifuru bụ 6 cm.
Ihe a na-adịghị ahụkebe nke chrysanthemum bụ na ọ nwere ike ịgbanwe agba ya site na lemon ka ọ bụrụ ọbara ọbara. Ọ na-eme ya, na-enwe n'ime ụlọ agha ya ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke odo odo na terracotta shades nke dị iche iche saturation. N'iji aka ya nwere okooko osisi abụọ.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ịma mma dị otú ahụ n'ụlọ, na oge opupu ihe ubi, ị ga-atụba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ma ná mmalite oge okpomọkụ - na-esi na ya pụta. A na-eme nke a iji hụ na okooko osisi ndị fọdụrụ dị oke.
Nke a na-acha ọcha chrysanthemum nke Korea adịghị njọ karịa ndị ọzọ acha. Ogologo ya ruru 60 cm, na dayameta nke ifuru bụ 6 cm.
Ebe osisi nke okooko osisi nwere ude ndò. Ogwu ha dị ogologo ma dịgide adịgide, ma okooko osisi niile na-adịgide adịgide.
Nke a dịgasị iche iche nwere agba mara mma - nke terracotta mara mma. Ha dị elu 60 cm, na dayameta nke ifuru bụ naanị 4 cm. Ọ na-anọchi anya ya maka enweghị ihu ọma na ihu igwe na ike ịbịa ntoju n'oge oyi. Otú ọ dị, ọ naghị anabata ebe dị iche iche.
Ụdị chrysanthemums dị iche iche na-egbuke egbuke ma gbaa ya mmanụ. Ogologo ya dị ntakịrị ala karịa ụdị ndị ọzọ - 55 cm, na dayameta nke ifuru dị ntakịrị - 2.5 cm. A pụrụ ịsị ụdị nke a na Multiflora. Ọdịiche dị iche iche na-egbochi oyi oyi, ma oge na-agba oyi.
Ị ma? Na Asians, a na-ejikọta osisi a na obi ụtọ. A na-ewerekwa ya dị ka ihe nnọchianya nke ọbụbụenyi, nkwanye ùgwù na nzuzo, ma ịhụnanya enweghị atụ.
Nke a chamomile chrysanthemum nwere epupụta abụọ na-abụghị nke abụọ, a na-ewerekwa ya dị ka otu n'ime ala chrysanthemums kachasị mma. N'ihi na enweghị nchebe na nlekọta, n'oge na-enwe ngwa ngwa ma dị mma. N'adịghị ka chamomile, nke nyere ya aha, o nwere uhie-acha odo odo.
Nke a dịgasị iche iche nke nnukwu chrysanthemums. Ha chọrọ ala na-eme nri, ma ọ bụghị ya, okooko osisi anaghị achọ ịmalite. Ogo nke ohia ruru 70 cm, na dayameta nke ifuru bụ ihe dị ka 7 cm. Agba dị nnọọ nlezianya - ìhè lilac, ma nso nke etiti ifuru ọ na-agba ọchịchịrị.
Ọ dị mkpa! Taa, e nwere ihe dị iche iche nke chrysanthemum dị 650, n'ihi ya, cheta na ụdị ọ bụla dị iche iche bụ onye ọ bụla chọrọ nlebara anya pụrụ iche.
Nke a na-acha ọcha chrysanthemum, ma ọ bụrụ na okooko osisi "overripe" ntakịrị, ha nwere ike ịgbanwe na akwa lilac agba. Uche ude mmiri udeme. Oke kachasị dị elu bụ 70 cm, na dayameta nke ifuru bụ 7 cm. Osisi ya dị n'ụdị pompons.
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kacha mma na nke mbụ nke chrysanthemums. Ọdịdị dị elu - 60 cm. Osisi ndị ahụ dị egwu ma dị mma nke ọma, ha dị nhata dị 6,5 cm.
O nwere uto magburu onwe ya na mmepụta ngwa ngwa. Otu n'ime ndị na-eguzogide ọgwụ chrysanthemums maka oyi.
Nke a bụ otu n'ime ihe kacha mma na-acha uhie uhie chrysanthemums. Ogologo ya dị ihe dị ka 50-60 cm, na dayameta nke ifuru bụ 6 cm. Ụdị a dị nnọọ ka Red Moscow dị n'usoro nke ya, agba na agba. Egwu nke Lipstic dị ike na oke.
Nke a na krisanthemum nwere agba odo odo. Ọ dị oke elu - 80 cm, okooko ya dịkwa oke - 10 cm na dayameta. N'ime ite ahụ mgbe ị bechasị bouquet ahụ ga-adịru ọtụtụ izu n'iji, ma ọ bụrụ na ị na-agbaso ịdị ọcha nke mmiri.
Ya mere, anyị matara ụdị nke dị na Korea na nkọwa ha. Niile umu ha mara mma ma di iche iche. Kpomkwem onye ọ bụla n'ime ha ga-enwe ike ime gị obi ụtọ na ha okooko na ume. A sị ka e kwuwe, okooko osisi mara ezigbo mma.